QCS For pcb Assembly - Shenzhen Anoshamisa Technology Co., Ltd
Zvinoumba Quality kuzvidzora
Kuti tive nechokwadi kuti kuurongwa kushandiswa vari hwakanaka, pane pezvakaitwa wandei kuti tinotevera:
1. Zvakaita kutarisana yemagetsi zvinoriumba rokuongorora kwacho kunosanganisira:
* Packaging amutsvaka:
-Weighed uye zvakaongororwa kutambudzika
-Taping ezvinhu akaongorora-dented pasuru etc.
-Original fekitari chisimbiso vs. asiri fekitari chisimbiso
* Shipping magwaro rukasimbiswa
-Purchase hurongwa uye okutengesa hurongwa nhamba mutambo
* Manufacturer P / N, uwandu, musi Bumbiro ongororo, RoHS
* Mwando chipingamupinyi kudzivirirwa rukasimbiswa (MSL) -vacuum rakanamwa uye mwando chakarurama pamwe Specification (Hic)
* Products uye kavha (mifananidzo uye zvakarongwa)
* Body rokuisa chiratidzo rokuongorora (vachatorerwa nyora, akaputsika wenyaya, kaviri anodhinda, ingi inoratidza, etc.)
* Physical ezvinhu rokuongorora (vatungamirire evapambi, anokwenya, chipped of micheto, etc.)
* Chero dzimwe ziso hadzina kufambiswa zvakanaka zvakawanikwa
2. Engineering zvinoriumba Inspection
zvikuru unyanzvi uye vakadzidziswa dzedu mainjiniya kugamuchira hurongwa kuti kunyatsoongorora panguva nemaziso pamwero kuitira kusachinja-chinja uye unhu. Chero fungira nhengo kana kusabvumirana kuti zvakwakafukurwa mune kutarisana rokuongorora muitiro vachange kana achasimbiswa kana discounted nokutora chigadzirwa zvakabudiswa acho / nhengo.
The ouinjiniya zvemagetsi zvinoriumba Kuparadzirwa rokuongorora kwacho kunosanganisira:
* Review chinooneka rokuongorora zvakawanikwa uye manotsi
* Purchase uye rokutengesa zvirevo nhamba rukasimbiswa
* Verification pamusoro Etikette (bhaa Codes)
* Manufacturer kuti Logo uye musi nerogi ongororo
* Mwando utetsa pamwero (MSL) uye RoHS chinzvimbo
* Kukuru rokuisa chiratidzo zvachose nemiedzo
* Review uye kuenzanisa kuti mugadziri datasheet
* Solderibility Testing, kuti ivhu rakagara nokukurumidza 'kukwegura' muitiro vasati kuedzwa kuti solderibility, kuti kufunga kwomuzvarirwo kukwegura migumisiro okuchengetera risati board- hwakawanda; Kuwedzera Engineering hurongwa Inspection tine LEVEL yokurohwa pasi mutengi chikumbiro.
X-Ray Inspection nokuda BGA Assembly
zvoga X-ray yedu rokuongorora hurongwa vanokwanisa kuongorora-siyana zvine chokuita ane rakadhindwa redunhu bhodhi mukurima gungano. Kuedzwa kunoitwa pashure pokunamatidza muitiro kuongorora kuremara mu pokunamatidza unhu. midziyo yedu anokwanisa "ona" solder majoini kuti vari pasi Mabhokisi akadai BGAs, CSPs uye pafiripi chip umo solder majoini zvakavigwa. Izvi anotibvumira kuziva kuti kereke zvaitwa zvakanaka. Zviparare uye mamwe mashoko dzakaonekwa nokuda rokuongorora mamiriro anogona kukurumidza anoongororwa muitiro akachinjwa kuderedza zvikanganiso uye kuvandudza okupedzisira zvigadzirwa. Nenzira iyi kwete chete ndivo zvikanganiso chaidzo dzakaonekwa, asi izvi zvingatotora akachinjwa kuderedza mhosva mumatunhu ari mapuranga kuuya kuburikidza. Kushandisa midziyo iyi anotibvumira kuti nechokwadi kuti soro mitemo vari kuramba mukereke yedu.
Aoi rokuongorora nokuti SMT
Somunhu chikuru yokuedzwa kwenzira mukereke pcb Chrono inoshanda kutsanya uye yakarurama rokuongorora zvikanganiso kana urema zvichiitika pcb gungano kwacho zvokuti mukuru unhu pcb magungano zvinogona nechokwadi vasina kuremara pashure kwavo kusiya gungano mutsetse. Aoi anogona kushandisirwa zvose pachena PCBs uye gungano pcb. Pano pane chinoshamisa pcb, isu achinyanya kushandisa Aoi kuzoongorora SMT (pemvura Mount Technology) gungano mutsetse uye kuti kuidzwa miti redunhu mapuranga, kubhururuka vachiongorora rinoshandiswa pachinzvimbo.
In Wonderful pcb Chrono midziyo iri zvichienderana yakakwirira-tsanangudzo kamera, midziyo iyi inogona kubata mifananidzo pcb pemvura achibatsirwa dzakawanda chiedza zvinyorwa. Zvadaro, kuenzanisa vachaitwa pakati rakundwa mufananidzo uye bhodhi parameters kuti zvave mazano kupinda kombiyuta pachine kuitira kuti kusiyana, abnormalities kana kukanganisa zvinogona anonyatsoratidza neDare pakuvara kugadzira software. The yose muitiro unogona kuongororwa chero wechipiri.
Aoi ndiye contributive kuti kunyatsoshanda kuvandudza nokuti anoiswa pamusoro SMT gungano mutsetse, chete pashure reflow. Rekukwazisa mamwe matambudziko zviri iongororwe akandomuzivisa ne Aoi zvokushandisa, mainjiniya anogona pakarepo kuchinja tsamba parameters zvapfuura nzendo gungano mutsetse kuitira kuti zvigadzirwa yasara achaitwa nemazvo vakaungana.
Kukanganisika Aoi anogona kufukidza achinyanya kuuya pokunamatidza uye yenhengo mhando. Maererano pokunamatidza urema ingabva akazaruka nematunhu, solder mabhiriji, solder zvikabudura, kushomeka solder kwazvo solder. Chinoumba zvikanganiso anosanganisa ukazvikudza kutungamirira, vasisina zvinoriumba, misaligned kana zvisizvo zvinoriumba.